Store Admin | Host Link IT Solution ﻿
. ပစ္စည်းသွားရောက်ဝယ်ယူသည့် ကိစ္စရပ်များလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
. အသက် ၂၂ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
. တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
. Computer Word, Excel (မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်) အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
. သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၁) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
. စတိုစာရင်းပိုင်းကို နိုင်နင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
We offer Salary is Negotiable.
Work location No.3, Room (A111), Mahar Swe Condominium, Mahar Swe St, Hlaing Tsp, Yangon
Company Industry: ITSolution
Store Admin Admin, Secretarial & PA jobs jobless Jobsinyangon.com Host Link IT Solution Co.,Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs ITSolution Jobs in Myanmar, jobs in Yangon